I-Brandnew ye-iPhone 5 yokufaka ibhethri yangempela China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-iPhone Battery > I-iPhone 5 Ibhetri > I-Brandnew ye-iPhone 5 yokufaka ibhethri yangempela
I-iPhone 5 1440mAh 4.23V 5.4whr
Ngifanele kuphi ukuthenga ibhetri ye-iphone 5 esikhundleni? Ucabanga ngalombuzo? Luckly, uza futhi uvakashele iwebhusayithi yethu manje. Singumshini webhethri we-iPhone e-Dongguan, e-China. Kunezisebenzi ezingaphezu kwezingu-60 zomsebenzi nabangu-4 othomathikhi wokukhiqiza.
qinisekisa ukuthi ikhasimende lakho lingathengela amabhethri afanelekile noma amabhethri esandla wesibili, sicela uxhumane nathi. Sizokusekela ngentengo efakile yentengo kanye nesevisi elandelayo emva kwezinyanga ezingu-12 iwaranti.